Kaominina an-tanàn-dehibe : hampianarina hanangona hetra sy vola ireo ben’ny Tanàna | NewsMada
Kaominina an-tanàn-dehibe : hampianarina hanangona hetra sy vola ireo ben’ny Tanàna
Hitady paikady vaovao. Hifarana, anio, ny atrikasa ho an’ny fikambanan’ireo ben’ny Tanàna an-tanàn-dehibe (AMGM), tanterahina etsy Ankorondrano. Anisan’ny hifampizarana traikefa amin’izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao eo anivon’ny kaominina sy ny fahaleovantena armin’ny vola miainga amin’ny hetra ary ny fampandrosoana ny tanàna.
Tsy afa-manoatra ka nikaon-doha hitady vahaolana manoloana ireo sakantsakana samihafa amin’ny fampandrosoana ny tanàna. “Tanànan’ny indostria Antsirabe nefa tsy misy miditra amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina ny hetra avy amin’izy ireo na ariary aza… Lasa tsy manara-dalàna ny fakana hetra sy ny haba samihafa ataon’ny ben’ny Tanàna sasany. Tokony hojerena koa ny lalàna amin’ny fandaminana ny fitantanana ny tanàna satria mbola miaina amin’ny lalàna efa tany amin’ny taona 1960 ny tanàna ka tsy mampandroso izany… Be karama lavitra ny mpiasan’ny kaominina raha mitaha amin’ny ben’ny Tanàna ”, hoy ny filohan’ny AMGM, ny ben’ny Tanànan’Antsirabe, Razanakolona Paul.
Hampiakarina ny tetibola natokana ho an’ny kaominina
Nanteriny koa fa tokony hohenoina ny ben’ny Tanàna amin’ny maha lohamasinina ho an’ny fampandrosoana azy ireo. Anisan’ny hiadiana hevitra koa ny hampiakarana ny tetibolam-panjakana natokana ho an’ny kaominina ho 20% raha 0,02% izany izao. “Eo koa ny fitadiavana loharanom-bola ho an’ny kitapom-bolan’ny kaominina”, hoy ihany izy. Andrasana ny ho vokatry ny atrikasa mba tsy ho eny ambony latabatra fotsiny ihany fa hihatra ary hahitana vahaolana ireo mety ho sakana, tsy ahafahana mampandroso ny tanàna tantanin’izy ireo.
Tsiahivina fa ben’ny Tanàna avy amin’ireo renivohitry ny faritra 22 izao nanao atrikasa izao. Nanohana ara-bola kosa ny avy amin’ny GIZ alemà, ny eo anivon’ny Pnud ary ny masoivohon’i Frantsa.